Ny karazana asa tselika aty Japon / アルバイトについて | 京都留学情報 by京都府　Information about studying abroad in Kyoto, Japan by Kyoto Prefecture
Ny karazana asa tselika aty Japon / アルバイトについて
Aty japon dia afaka manao asa an-tselika tokoa ny mpianatra. Saingy, alohan’ny hiasana dia tsy maintsa maka alalana any amin’ny bureau d’immigration. Tsy azo atao mihitsy ny manao aza tselika nefa mbola tsy nahazo alalana avy any amin’ny manam-pahefana manome izany. Noho izany dia ataovy karakarao tsara ny fahazon-dalana izay vao manomboka miasa. Etsy an-danin’izay dia maro tokoa ny karazana asa tselika aty Japana, saingy ny ankamaron’izy ireny dia ilaina fahafehezana ny teny japoney. Noho izany aza atao ambanin-javatra ny fianarana ny teny japoney. Maro dia maro tokoa ireo fomba ahazoana mitady ny asa tselika na izany amin’ny internet na ihany koa amin’ny magazine efa natokana amin’ny asa tselika toy ny “Town work”, ary dia avy amin’ny alalan’izy ireno no manao ny fangatahana. Akoatr’izay dia tia teny vahiny tokoa ny japoney, ary misy ihany koa ny karazan’asa mampianatra teny vahiny. Noho izany raha vonona tokoa ny ankizy hanao asa tselika dia tsy maintsy mahita.
投稿日: 5月 11, 2015 投稿者:studykyoto カテゴリー: Madagascar マダガスカル, Scholarship 奨学金、アルバイト